Fact Check: တပ်ထောက်ခံသူတွေက အကြမ်းဖက်မှုကို တပ်ထောက်ခံသူ အကြမ်းဖက်ခံရမှုအဖြစ်မျှဝေ - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတစ်ဦး တပ်ထောက်ခံပွဲလာသူတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်ခံရတာကို တပ်ထောက်ခံပွဲ လာသူတစ်ဦးအကြမ်းဖက်ခံရမှုအဖြစ်မျှဝေထားတဲ့ ဗွီဒီယိုတစ်ခု ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။
“တပ်မ​တော်​ထောက်ခံပွဲလာသူတဦးကို နီပိန်းလူမိုက်တစုမှဓါးနဲ့ထိုးတဲ့VIDEOပါ”လို့ရေးသားပြီး “စိမ်းနီမှာ ငါ့အဖြေက”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်က မျှဝေထားပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကို အခြားသော ရှု့ထောင့်က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကို “ယနေ့ ရန်ကုန် တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲ တပ်မတော်ထောက်ခံသူတစ်ဦး ဓားထိုးခံရသော ရုပ်သံဖိုင် ထွက်ပေါ်လာ
၂၅. ဖေဖော်ဝါရီလ. ၂၀၂၁
#ပြည်သူ့ပုံရိပ်မီဒီယာ #အကြမ်းဖက်ခံရ”လို့ ရေးသားပြီး ” ပြည်သူ့ပုံရိပ်မီဒီယာ” အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာက မျှဝေထားပါတယ်။
“စိမ်းနီမှာ ငါ့အဖြေက”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာက တင်းထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကို သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ RFA Burmese က ” တပ်ထောက်ခံသူတွေ အကြမ်းဖက် ဓားနဲ့ဝင်ထိုး”လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်မျှဝေထားပြီး ဖြစ်စဉ်ကို အောက်ပါအတိုင်းရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
” ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ ဒီနေ့နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန် ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်နားမှာ ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်ကို ထောက်ခံသူလူတစုဟာ လမ်းသွားလမ်းဟာ ပြည်သူတစ်ဦးကို ဓားနဲ့ဝင်ထိုးပြီး အုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်လုံခြုံရေးကင်မရာက ရရှိတဲ့ ဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းထဲမှာ လူတဦး ဝမ်းဗိုက် ဓားထိုးခံလိုက်ရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ ပုံရိပ်များပါဝင်နေတာကို ကြိုတင်အသိပေးပါတယ်။”လို့ရေးသားပြီး မျှဝေထားပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က တပ်ထောက်ခံသူတွေဟာ ဒုတ်၊ဓား၊လေးခွစတဲ့ လက်နက်တွေအသုံးပြုပြီး ပတ်ဝန်း ကျင်က လူတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကို အခြားသော သတင်းဌာနတွေကလည်း ဖော်ပြထားတာ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်တွေအရ ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတစ်ဦး တပ်ထောက်ခံပွဲလာသူတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်ခံရခြင်းဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။
Title:တပ်ထောက်ခံသူတွေက အကြမ်းဖက်မှုကို တပ်ထောက်ခံသူ အကြမ်းဖက်ခံရမှုအဖြစ်မျှဝေ
Tagged Claim Reviewဆန္ဒပြထောက်ခံပွဲ